MGY FC virus အကြောင်း တစေ့တဆောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » MGY FC virus အကြောင်း တစေ့တဆောင်း
MGY FC virus အကြောင်း တစေ့တဆောင်း
Posted by nitrospeed on Aug 8, 2010 in News | 1 comment
ပညာရှင်များ နဲ့ သိပြီးသားများကို မဆိုလိုပါဘူး……… မသိသေးတူတွေအတွက်ပါ…………
IT လောကထဲမှာ အခုလက်တလော သောင်းကြမ်းနေတဲ့ Magway FC ဆိုတဲ့ virus ကိုတော့ IT လောကသားများကြားနေရတယ်………………
ဒီကောင်ဟာ တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်………. အလုပ်လုပ်လို့အစဉ်မပြေဘူး…………… စဖြစ်တာဘယ်ကလဲတော့ မသိရပေမယ့်……………..
အခုချိန်မှာ Magway FC virus ကို ရှင်းလို့ ရနေပါပြီ………….. ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်များရဲ့ အကူအညီကိုယူမယ်ဆိုရင် computer အသုံးပြုတွေအနေနဲ့ ပိုပြီး အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်……….. ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှ ကျေနပ်သဘောကြသူတွေအတွက် ကြိုးစားပြီး ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်…… ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ အခက်အခဲရှိပါတယ်……… ကြိုးစားကြည့််ပါ……..
Magway FC virus က တော်တော်ဆိုးပါတယ်……….. Magway FC virus ၀င်နေပြီဆိုရင် computer သုံ၇တာ အစဉ်မပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်…….. Magway FC virus က ၀င်ဝင်ခြင်းတော့မသိသာပါဘူး……. ကြာလာတာနဲ့အမျှ virus ရဲ့လက္ခနာတွေကို တဖြည်းဖြည်းခြင်းပေါ်လာပါတယ်……. တစိတ်လောက်ဖြတ်ပြောပါရစေ…… Magway FC virus ရေးတဲ့လူတော်ပါတယ်…….. နောက်ဆုံးပေါ် Anitvirus software တွေတောင် သက်ပေးဖို့နေနေတာတာ ရှာတောင်မတွေ့ဘူး…….. Magway FC virus ရေးတဲ့လူတော်ပါတယ်…… computer သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲကြတော့အစဉ်မပြေမှုတွေဖြစ်ကုန်တာပေ့ါ…….. ကျေးဇူးပြုပြီး Magway FC virusေ၇းသားသူကိုတွေ့ရင်ပြောပေးပါ……. virus ရေးတဲ့ဘက်မှုလို ထူးချွန်သလိုမျိုး လူတွေကိုကူညီပေးပါလို့ ……….
Magway FC virus ဆိုနေမှတော့ ဘောလုံးအသင်းလို့တော့ မထင်လိုက်ကြနဲ့နော်……. ဒါပေမယ့် ဘောလုံးပုံတွေတော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…….. Magway FC virus ရဲ့ လက္ခလာ တွေက start Menu က start ဆိုတဲ့စာသားကို Magway FC လို့ပြောင်းလိုက်တယ်…….. Desktop ပေါ်က Icon တွေကို ဘောလုံးပုံသေးသေးလေးတွေ ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်………
ကျွန်တော်ပြောပြနေတာတွေက မပြည့်စုံသေးဘူး…… ပြည့်စုံအောင်တော့ ကြိုးစားပြီးရေးပေးပါ့မယ်……..
အခုတော့ Magway FC virus ကိုရှင်းဖို့အတွက် အဲဆိုဒ်လေးမှာ download လုပ်ယူလိုက်ပါ……..
Magway FC virus ရှင်းတဲ့ software လေးပါ……….
ပုံနှင့်တကွရှင်းပြပေးထားလို့ လုပ်ရတာ အစဉ်ပြေပါတယ်…….. ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်ပါ…………..